Archive du 20200319
Adin’ny samy manampahefana Depiote sy ben’ny tanàna nifanao iray sy iray…
Raikitra ny fifandonana sy fifamaliana teo amin'ny Filoha Lefity ny Antenimera, Rtoa Jocelyne Maxime sy ny Ben'ny Tanana Antsiranana I, Atoa Djavojozara Jean Luc omaly alarobia 18 martsa.
Fikambanana Olona Hasin’ny Tany Andao hampandeferina aloha ny hambom-po
Nihaona tetsy amin’ny Hotely Le Pavé etsy Antaninarenina omaly 18 martsa ireo mpitarika sy mpikambana ao anatin’ny Fikambanana Olona Hasin’ny Tany na ny OHT tarihin-dry Dr Emile Ratefinanahary sy Dr Hery Raharisaina.
Loholon` i Madagasikara Nofandrihana saingy efa fetsy ihany koa
Nolanian’ny teo anivon’ny Antenimierandoholona ny alarobia 11 Martsa lasa teo ny « motion de rejet » izay natolotrin’ny vondrona Parlemantera HVM izay
Fiaraha-mientan’ny mpiasam-panjakana « Mampahantra anay ny fitondrana ankehitriny. »
Niantso sy nanentana ireo mpiasam-pirenena na “retraités de l’Etat » isaky ny minisitera manerana an’i Madagasikara tetsy amin’ny Telozoro
Orange Pro-League Malagasy Nankasitraka ny mpanao gazety ara-panatanjahantena Malagasy
Tamin’ny fitafatafana fohy tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny “Tour Orange” teny Ankorondrano omaly alarobia 18 martsa 2020 nifanaovan’ireo
Baolina kitra - Tounoi de Pâques 2020 Faritra 4 no efa manana solontena handray anjara
Faritra 4 ankehitriny no efa fantatra fa hanana solontena handray anjara amin’ny fifaninanana baolina kitra “Tounoi de Pâques 2020” andiany faha-5
Andriafenosoa Bienvenu Victorio Maniry ho tonga matihanina amin’ny kitra any ivelany
Feno 12 taona katroka ankehitriny i Andriafenosoa Bienvenu Victorio mianatra ao amin’ny kolejy St Michel Amparibe “Classse de 5eme” ary mazava loatra fa
Azo lazaina hoe tao anatin’ny herinandro izao dia “niaina tsotra” ny vahoaka. Saika fanambarana feno fampiombonana sy fifanentanana hatrany no matetika heno.
Olona tonga avy any Frantsa Misy mivoaka ny trano, mampanahy…
Nomena safidy na hitoka-monina eny amin’ny Hopitaly Manara-penitra Andohatapenaka, amina hotely na any an-tokantrano, arahi-maso isan-droa isan’andro ny hafanany ireo mpandeha avy amin’ilay sidina AF 934 tonga avy any Frantsa.
“Zone Franche” Mananontanona ny fahaverezan’asa faobe
Efa miantraika amin’ny firenena rehetra ny voka-dratsin’ny valan’aretina Coronavirus. Eo amin’ny lafiny ara-toekarena dia efa misy akony mivantana amin’ny tsena rehetra izany.
Fikambanan’ny “Tour Operators” eto Madagasikara Tsy maintsy ho foanana tanteraka ireo famandrihan-toerana
Nandritra ny fivoriam-ben’ny fikambanan’ny Tour OPerators (TOP) eto Madagasikara tetsy amin’ny INTH Ampefiloha omaly no nanapahan’izy ireo hevitra ny fanemorana ireo drafitrasa rehetra hotanterahina amin’ity taona ity.
Ady amin’ny homamiadana Hifanome tanana ny Etamazaoron’ny tafika sy ny Fondation Akbaraly
Hifanome tanana amin’ny ady hatao amin’ny aretina homamiadana mahazo ny vehivavy ny Etamazaoron’ny tafika Malagasy (EMGAM) sy ny fondation Akbaraly ary ny Ong La Vita Per Te.
Vaky trano teny Alasora Nanjavona hatramin’ny reny akoho sy voromailala
Lehilahy iray no voasambotry ny fokonolona tao amin’ny fokontany Ambodivondava Andrefana ary natolotra ny polisim-pirenena ao amin’ny CSP Alasora ny alarobia faha 18 martsa teo rehefa avy namaky trano.
LA REUNION KELY Ankizy madinika maro no hahazo kopia mari-pahaterahana
Tsy manana kopia mari-pahaterahana ny ankamaroan’ireo ankizy madinika monina eny La Réunion kely.
Vono olona feno habibiana Notsatohana antsy ny lohan’ilay tovovavy
Tena efa mivadika biby ny olombelona. Tsy misy fanahy intsony. Tovovavy iray vao 22 taona monja indray antsoina hoe :
Siosion-dresaka momba ny Coronavirus Nisavorovoro ny tao Tsiroanomandidy
Tena zava-doza ny mety ho vokatry ny tsaho.Nikorapaka izay tsy izy ny olona tao an-tampon-tanàna Tsiroanomandidy omaly maraina noho ny resaka Coronavirus.
Tsaho amin’ny facebook Manomboka ny fisamborana
Voasambotry ny polisim-pirenena ilay tovolahy antsoina hoe Ramanantena Cressant, mipetraka any Ambodimanga Ambalamanasy Andapa, nanely vaovao
Fanatontosana ny praograman’ny fitondrana Lojika raha somary takona
Lojika raha somary takona ny fanatontosana ny praograman’ny fitondram-panjakana na IEM amin’izao fotoana izao, raha ny fanazavan’ny sekretera jeneralin’ny Emergence Madagascar,